Maankaab.com | Archive | Arrimaha Bulshada
Home » Archives by category » Arrimaha Bulshada
Hargeysa (MK)- Halkan ka daawo warbixin laga diyaariyey wiil hal abuur ganacsi oo cusub la yimi, kaasoo bacaha iyo waxyaabaha hadhaaga ah ee jilicsan ka sameeya kabaha. Khaalid Foodhaadhi Reporter: Goobjoog TV Hargeysa, Somaliland. Share This:
1st March 2018 No Comment
Biji (MK)- Wefti uu hoggaaminayo Wasiirka wasaaradda Horumarinta Beeraha Somaliland Mudane Axmed Muumin Seed oo ay ku weheliyaan Agaasimaha guud ee Wasaaradda Maxamed Cilmi Aadan (Ilkacase), xubon ka socda Agaasime waaxeedya wasaaradda, masuuliyiin ka socda Baanka horumarinta Jarmalka ee KFW iyo Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Gabiley Cali Cabdilaahi (Cali Case) ayaa kormeeray bilawga Mashruuca ciidda […]
Halkan ka dawo warbixin ku saabsan hoggaamiyaha Turkiga ee Tayyip Erdogan, taasoo taabanaysa dhinacyo badan; Share This:
26th February 2018 No Comment
Maankaab (MK)- Halkan ka daawo warbixin ka hadlaysa xog ku saabsan dhallinyarada Somaliland ee loo qadaayo dalka Qadar, isla markaana loo qoranaayo askaranimiada. Xigasho: Goobjoog Tv Share This:
SOMALILAND: ELECTION CAMPAIGNS CONCLUDED AHEAD OF 13 NOVEMBER VOTING
11th November 2017 No Comment
Maankaab (Hargeisa)- On 13th November 2017, a presidential election will take place where over seven hundred registered citizens will vote for the man who will rule Somaliland the coming five years. Three presidential candidates representing three political parties are competing for the office of the presidency along with vice-presidential running mates. A twenty one days […]
Cudur Halis ah oo Laga Baqaayo inuu Qaarada Afrika ku Fido, Waddanka Laga Helay iyo Dalalka Degdega loogu sii Digay
5th November 2017 No Comment
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, ayaa la tacaalaysa sidii ay xakamayn lahayd xannuun hawada ku fidaya (Airborne Plague)oo ku dhuftay dalka Madagascar, iyadoo laga cabsi qabo inuu sagaal dal oo kalena ku fido. In ka badan 1,300 kiis oo xannuunkan ah ayaa laga soo sheegay dalka Madagacsar, sida ay madaxda caafimaadka hay’addan tilmaameen, waxaanay ka […]
Somaliland: Doodda ay Yeesheen Murrashaxiinta Jagada Madaxweyne Maxay Muujisay?
25th October 2017 No Comment
W/Q: Ibraahim Khadar Hordhac Taariikhda 19/10/2017 waxa ay gashay rikoodhka kaydka dhacdooyinka siyaasiga ah ee Geeska Afrika. Waa markii ugu horraysay ee Somaliland amma Geeska Afrika lagu qabto dood siyaasadeed ay isku wajaheen murrashaxiin jagada Madaxweynenimo u tartamaya. Habeennimadaas shacabka Somaliland waxay u ahayd habeen taariikhdooda siyaasiga ah ku cusub. Goob-joog waxa ay u noqdeen […]
Maxaa loo dhaariyay weriyeyaasha?
22nd October 2017 No Comment
Maxaa loo dhaariyay weriyeyaasha? Dooddii markay taariikhdu ahayd 19-10-2017 dhex martay musharraxiinta saddex xisbi qaran ee Somaliland ee u tartamaya madaxtinnimada dalka waxa iiga muuqatay arrin ugub ah oo aanan warbaahinta horay ugu arag hase ahaatee dooddan aan ku dhex arkay. Waxa cusub ee iiga muuqday ayaa ah in weriyeyaashii doodda daadihinaayay la dhaariyay si […]
Warraysi Taabanaya Waayo Badan: Dr. Edna Aadan Ismaciil
10th October 2017 No Comment
Halkan ka daawada waraysi uu Cabdishakuur Xaaji Muxumed Muuse (Heersare) uu Dr. Edna Aadan Ismaaciil kaga qaaday magaalada Oslo ee dalka Norway. Halkaas oo ay kaga qayb gashay shir caalami ahaa oo ku saabsanaa caafimaadka haweenka, isla markaana intii ay Norway ku sugnayd ay kulanno la yeelay madax ka mid ah dawladda Norwiijiga . Waraysigan uu […]
Jacaylkii Soo Rafaaday Q4
Qaybtii 4aad Markay Humbuqto ku soo baxeen ayuu Qummane foojignaan galay, durba bidhaan dad buu arkay, waa Buux oo dhinaca waddada u soo cararaya gacmahana kor u taagaya. Mar qudha ayaa jooji, jooji laga dhex yidhi baska gudihiisa, waa la joojiyey. Intay Qummane iyo Geeddi soo degayeen Cambarona tallaabaday soo qaadaysay iyada oo wax […]
Page 1 of 212123Next ›Last »